लकडाउन उल्लंघन कि खकुलो? - Ujyaalo Sandesh Online
लकडाउन उल्लंघन कि खकुलो?
अबिन मेयाङ्बो,दमक/ सरकारले पछिल्लोपटक थपेको लकडाउनको अवधि सकिन अझै पाँच दिन बाँकी छ । तर सडक र बजारमा लकडाउन भएजस्तै देखिंदैन । चोकचोकमा जाम नै हुने गरी निजी गाडी निर्वाध चलिरहेका छन् । बजार खुलेका छन् ।
सडक गल्लीमा मान्छेको चहलपहल बढेको छ । मालपोत लगायतका सरकारी कार्यालय पनि खुलेका छन्।सार्वजनिक गाडी र शिक्षण संस्थाबाहेक अरु क्षेत्रमा लकडाउन भएजस्तै लाग्दैन ।
सरकारका अनुसार कोरोनाको जोखिम बढे पछि सुरुका केही दिनमा व्यवसायी आफैँले पनि खाद्यान्न, फलफुल, औषधि लगायतका पसल बन्द गरेका थिए । तर लकडाउन लम्बिए सँगै बिस्तारै उनीहरुले अहिले पसल खोल्न थालेका छन् । तर फेन्सी र कस्मेटिक पसलमा भने खोल्न पाईने छैन ।
उद्यमशील महिला जागरण केन्द्रले प्रशिक्षार्थीहरुलाइ प्रमाण पत्र बितरण गर्यो।
रुपन्देहीमा असोज ४ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप